भाडाको घरमा बस्नेहरुले ध्यान दिनुहोस् यी कुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
भाडाको घरमा बस्नेहरुले ध्यान दिनुहोस् यी कुराहरु !!
कुनै व्यक्तिको सोच हुन्छ की वास्तुशास्त्रको लाभ लिनका लागि घरको तोडफोड गर्नुपर्दछ, त्यो भाडाको घरमा बस्नेलाई सम्भव छैन्। त्यस्तै केही व्यक्तिको सोच हुने गर्दछ की वास्तुको प्रभाव केवल घरमालिकलाई मात्र पर्दछ। तर भाडामा बस्नेलाई पदैन्।
भवनको जुन क्षेत्र वा फ्लोरमा तपाईको कोठा छ, त्यहाँ प्रवेश गर्ने मुख्य ढोकाको तपाईको जीवनमा गहिरो प्रभाव पर्दछ। उदाहरणका लागि यदी उक्त ढोका दक्षिण दिशाको तेस्रो स्थानमा छ भने अत्यन्त धन एवम यशको कारण बन्न सक्छ।
वास्तुशास्त्रको वैज्ञानिक तथ्यलाई बुझ्नु हुन्छ भने तपाई घरका प्रत्येक कोठा आदर्श दिशामा निर्धारन गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तुशास्त्रका अनुसार प्रत्येक कोठाका १६ दिशामै प्रभाव बताइएको छ।
यदी तपाई फोटोग्राफ्ट, पेन्टिग्स एवम् रेकोरेशनका बस्तु सही दिशामा राख्नुहोस्। तपाईले भाडाको घरमा पनि वास्तुशास्त्रको सही प्रयोग गरेर सुख, शान्ति र समृद्धी जीवन विताउन सक्नुहुनेछ। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)